इजोरिया- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
एउटाको खुसीमा अर्काको जिन्दगी
सानै उमेरमा हुने बिहेले एकातिर पढाइ अवरुद्ध हुन्छ, अर्कोतिर कलिलैमा बच्चा जन्माउनाले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ । महिलाको स्वास्थ्य बिग्रने, कमै उमेरमा शरीर अशक्त हुने, बूढी देखिने जस्ता समस्याले पारिवारमा मनोमालिन्य निम्त्याएको छ ।
चैत्र १९, २०७३ सम्झना वाग्ले भट्टराई
उमेर १५ वर्ष । ९ कक्षमा पढ्दै थिएँ । उमेरजन्य अनुभूति थिए होलान् तर बिहेको बारेमा सोचेकै थिइन् । आमाले भन्नुभो बिहेको कुरो । मेरो बिहेको लागि किन त्यस्तो हतार भा’को तपाईंहरूलाई ? आमासँग च्याठिएँ । जा तेरै बासँग सोध् । आमा सहजै पन्छिनुभो । अहिले त बड्डासँग खासै कुरो गर्दिनँ, त्यतिखेर त बोल्ने आँटै आउँथेन । आफूलाई थाम्नै सकिनँ, रोएँ, रोइरहें । कसैले चासो दिएन र पछि आफैं रोकिएँ ।
बजार (सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर) बाट झन्डै ४ घण्टाको पैदल दूरीमा पथ्र्यो मेरो घर (माइतीघर), अहिले त मोटरबाटो घरसम्मै जान्छ । त्यतिखेर बजारबाट माग्न आएका भनेपछि के चाहियो र ? त्यही पनि वीरेन्द्रनगरमा पक्की घर । केटाका बड्डा सरकारी जागिरे ।
बड्डाको मनले खाएपछि अरू के चाहिन्थ्यो र (?) बिहे भैहाल्यो ।
त्यो बेला त के बुझें र ? उसको लगातारको झम्टाइ, सहनै सक्थिनँ । दिन त जेनतेन बित्थ्यो, रात बित्न जुग लाग्थ्यो । के बिहे भनेको यही हो ? बिहेको कुरा चल्दा भन्दा बिहेपछि धेरै रोएँ । बेहिसाब पीडा सहेँ । कसलाई भन्नु ? कसरी भन्नु ? लोग्ने–स्वास्नीबीचको कुरो ।
उसको ‘त्यो’ बिरामी रहेछ । बिहे गरेपछि ठीक हुन्छ कि भनेर बिहे गर्दिएका रे , त्यत्रो सरकारी जागिर खाएका, त्यति धेरै पढेलेखेका हाम्रा बड्डाले, छोराको स्वास्थ्य ठीक हुन्छ भनेर, आफ्नो खुसीको लागि मेरा सारा खुसी खोसे । एक कक्षादेखि फस्ट सेकेन्ड हुँदै आएकी मैले ९ कक्षाको जाँचै दिन पाइन । ऊ बिरामी, उसले नि पढेन, मेरो कथा यस्तो भैहाल्यो । भविष्य सम्झेर कहाली लागेर आउँछ ।’
सीमा बोहोरा (नाम परिवर्तन)े को कथा ।
उनको अहिलेको उमेर २४ वर्ष । ठूली छोरी ८ वर्षकी र छोरा ५ वर्षका छन् । बिहेताका उनको लोग्ने डन्–वानिज्म (पुरुषमा अत्याधिक यौन चाहना हुने बिरामीपन) बाट ग्रस्त रहेछन् । तर अहिले यौनेच्छा नहुने समस्याबाट ग्रस्त छन् । सीमा भन्छिन्– ‘त्यतिखेर त बच्चै थिएँ नि, अहिले भएको भए त के हुन्थ्यो र ? तर आजभोलि उसकै रुचि छैन ।’ झन्डै एक महिनाको मित्रतामा उनले खोलिन्– ‘उसको त्यतिखेरको बिरामी मलाई पो सरे जस्तो छ, मनै अडिँदैन ।’ हामीले मनोविश्लेषकसँग परामर्श पनि गर्‍यौं । उनका अनुसार सीमामा निम्फोमेनिया (महिलामा अत्याधिक यौन चाहना हुने बिरामीपन) का लक्षणहरू देखिएका छन् । उनमा अहिले निम्फोमेनिया देखिनुको कारण उनको कलिलो उमेरको तनावपूर्ण यौनजीवन हुन सक्ने पनि ती मनोविश्लेषकले बताए ।
पार्वती भट्ट (नाम परिवर्तन), उमेर ३१ वर्ष । उनी सुर्खेतकै स्थानीय गैससमा सामाजिक परिचालकको काम गर्छिन् । उनी काम गर्ने गैससले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गर्छ । सुर्खेतकै बाबियाचौर, विद्यापुर, साहारे उनको कार्य क्षेत्र पर्छ । सुर्खेतको बाबियाचौर क्षेत्रमा विद्यामान बालबिहेको बारेमा कान्तिपुर दैनिकमा पनि समाचार आइसकेको छ । र, उनको काम पनि बालबिहे तथा महिला घरेलु हिंसाकै विरुद्धमा लक्षित छ । दिनभरि कार्यक्षेत्रमा खटिएर साँझपख घर फर्कंदै गर्दा उनको तन मात्र थाकेको हुँदैन, मन झनै विरक्त भएर आउँछ ।
बिहे भएको १६ वर्ष भयो, ठूली छोरी नै १५ वर्षकी भई । १५ वर्षको उमेरमा १० कक्षा पढ्दापढ्दै पार्वतीको बिहे भयो । पढाइ राम्रै थियो । बिहेपछि पनि धन्न एसएलसी दिन पाइन अनि पास पनि भइन । त्यसैले त अहिले सानोतिनो भने पनि जागिर छ । तर दु:खका पहाडहरू छिचोल्नै नसक्ने गरी अग्ला लाग्छन् उनलाई । दिनभरि बालबिहे तथा महिला घरेलु हिंसाविरुद्ध पैरवी गर्दै हिँडेर के भयो र ? उनी आफैं यसबाट पीडित हुन् । त्यसो त ३१ वर्ष आफैंमा धेरै होइन । भनिन्छ, ३० देखि ३५ वर्ष सम्मको उमेरमा महिला जीवनकै सुन्दर र ऊर्जाशील जीवन बाँच्छन् । तर पार्वतीको हकमा यो लागू हुँदैन । ३१ वर्षको उमेरमा बितेका २ गरी पाँच बच्चा जन्माइसकिन् । उनको अनुसार न तनमा रहर छ न मनमा । त्यसै–त्यसै थकित छिन् । ३४ वर्षका उनका श्रीमान् स्थानीय क्याम्पसमा पढाउँछन् । उनको ठाँट–रबाफ अर्कै छ । आकर्षक शरीरका उनी पार्वतीभन्दा धेरै जवान देखिन्छन् र त पार्वतीसँगै हाकाहाकी भन्छन्– ‘तँ मेरो लागि सुहाउँदिनस् । मेरो लागि बाटो खुल्ला गर्दे ।’ बाहिरफेर केटी लिएर हिँड्ने मात्र होइन कहिलेकाहीँ घरमै लिएर पनि आउँछन् । मानसिक हिंसासँगै शारीरिक हिंसा पनि सहनुपर्छ उनले निरन्तर । लोग्ने बूढी भइस् भनेर बेवास्ता गर्छन् भने छोरी मात्र पाउने भनेर सासुससुरा पनि असन्तुष्ट । पार्वतीको लागि महिला घरेलु हिंसाविरुद्ध जनचेतना तथा पैरवी जागिर मात्र भएको छ । उनको अफिस पनि उनको कथासँग पूर्ण बेखबर छैन । त्यसैले त कार्यक्रम संयोजक अफिस मिटिङमा कहिलेकाहीँ हाकहाकी भन्ने गर्छन्– पार्वतीको कथा नै एउटा राम्रो ‘केस स्टडी’ बन्न सक्छ ।
आफ्नै अफिसको कर्मचारीको पीडा ‘बोस’ लाई ‘केस स्टडी’ भन्दा बढी केही लाग्दैन भने त्यस्तो पैरवीबाट उनले के अपेक्षा गर्ने । त्यसैले त जागिर उनको लागि सिर्फ जागिर बनेको छ । कुरै कुरामा सम्बन्धविच्छेदबारे पनि छलफल भयो । ‘पढ्ने उमेरमा बिहे गर्नुपर्‍यो, तीन–तीन जना छोरी कसरी पाल्ने (?), आफ्नै जीवन त बोझ भैसक्यो । केको लागि सम्बन्धविच्छेद ?’
पार्वतीको व्यथा ।
सुर्खेत कुनाथरीमा भेटिएकी दैलेखकी निउरी मिजारले पनि २८ वर्षको उमेर हुँदासम्म ६ बच्चा जन्माइन् तर दुईजना मात्र बाँचे । उनी अहिले आङ झर्ने समस्याले पीडित छिन् । यस्ता समस्याग्रस्त पात्र खोज्न कुनै गम्भीर अनुसन्धानको जरुरी हुँदैन छरपस्टै भेटिन्छन् ।
यी प्रतिनिधि समस्याहरूको जरा कहीँ न कहीँ कम उमेरमा गरिने बिहेसँग जोडिएको छ । सानै उमेरमा हुने बिहेले एक त पढाइ अवरुद्ध हुन्छ भने, कलिलैमा बच्चा जन्माउनाले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ । सानै उमेरमा बच्चा जन्माएपछि महिलाको स्वास्थ्य बिग्रने, कमै उमेरमा शरीर अशक्त हुने, बूढी देखिने जस्ता समस्याले पारिवारमा मनोमालिन्य निम्त्याएको छ । परिवारमा विग्रह ल्याएको छ र यसको कष्ट महिलामाथि नै बढी परेको उदाहरणहरूले देखाएका छन् ।
हयुमन राइटस् वाचको सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार, विश्वभरमा अहिले पनि ७० करोडभन्दा बढी महिलाहरूको बिहे २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा भएको छ । तीमध्ये एक तिहाइ महिलाहरूको उमेर त १५ वर्षभन्दा कम छ । यी एक तिहाइमध्ये पनि आधा दक्षिण एसियाका छन् । बालबिहेको लागि नेपाल दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा रहेको युनिसेफको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार ३७ प्रतिशत नेपाली किशोरी १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा बिहे गर्छन् भने १० प्रतिशतले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गरेको तथ्यांक छ ।
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी युवतीको बिहे १० देखि १४ वर्षको बीचमा भएको छ । सन् २००१ को नेपाल जनसंख्या स्वास्थ्य सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार १९ वर्षमुनिको विवाहको दर ४० प्रतिशत थियो । सन् २०११ मा आइपुग्दा यो दर २८.२ प्रतिशत छ । घट्दो दरमा भए तापनि यो सन्तोषजनक स्थिति भने होइन ।
सन् २०१४ मा बेलायतमा भएको ‘इन्टरनेसनल गर्ल समिट’ मा नेपालले सन् २०२० सम्ममा बालबिहे अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सन् २०१६ मा भएको ‘नेसनल गर्ल समिट’ मा यो प्रतिबद्धतालाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वर्ष सन् २०३० सम्ममा सारिएको छ ।
नेपालको कानुनले बालविवाहलाई गैरकानुनी मानेको छ । मुलुकी ऐनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानेको छ । कानुनी बन्देज हुँदा पनि किन हुन्छ त बालबिहे ? अध्ययनहरूका अनुसार गरिबी, शिक्षाको कमी, सामाजिक दबाब, दाइजोको दबाब, यौनप्रतिको बुझाइ आदि बालबिहेको कारकका रूपमा देखा पर्छन् ।
गरिबीकै कारणले छोरीको बिहे चाँडै गरिदिने अभिभावक मात्र होइन, गरिबीबाट उन्मुक्ति तथा सुखद जीवनको आशमा छिट्टै बिहे गर्ने किशोरीहरू प्रशस्त छन् ।
अध्ययनकै सिलसिलामा, १५ वर्षकै उमेरमा भागीबिहे गरेका जोडी दिलसरा घर्ती र विराट पुनसँग कुराकानी भयो । केही अरू कुरा गरेपछि यति सानै उमेरमा किन बिहे गरेको भनेर सोधेँ । एकछिन् उत्तर दिन अन्कनाएपछि उल्टै मलाई सोधे– ‘बिहे किन गर्छन्, त्यति पनि थाहा छैन ?’
उनीहरूको संकेत यौनसम्बन्धतर्फ थियो ।
त्यसो त हाम्रो समाजमा यौनसम्बन्ध र बिहेलाई एउटै पाटोको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । त्यसो त सँगै हिँड्ने गरेका वा जानअन्जानमा यौनसम्बन्ध राखेकै कारणले अभिभावकले युवायुवतीको बिहे गरिदिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले किशोरावस्थामा भएको आकर्षण, त्यही उमेरमै बिहेमा परिवर्तन हुन्छ । सन् २०१२ मा सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा केही क्षेत्रमा बढ्दो प्रेमबिहेसँगै बालबिहे पनि बढेको उल्लेख छ । यसरी बालबिहे गरेका अधिकांशले यौनेच्छा पूरा गर्न बिहे गरेको बताएका छन् ।
अब काठमाडौंका कुरा, मेरो छोरा काठमाडौंकै निजी स्कुलमा २ कक्षामा पढ्छ । विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको अतिरिक्त कहिलेकाहीँ यसो बाहिरतिर घुमाउन लगे पनि हुने भनेर स्कुल इन्चार्जसँग भनेकी थिएँ । ती इन्चार्ज शिक्षिकाले भनिन्– ‘कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीलाई केही महिनाअघि रिफ्रेसमेन्टको लागि वनभोज भनेर त्रिभुवन पार्क लगेका थियौं, फर्कने बेलामा ३ जोडी विद्यार्थी आपत्कालीन अवस्थामा फेला परे ।’
‘आपत्कालीन ?’ मेरो प्रश्न ।
‘हो, यौनजन्य क्रियाकलाप, बित्यासै लाग्दो अवस्थामा,’ शिक्षिकाको उत्तर ।
कक्षा ६,७, ८ का विद्यार्थीको औसत उमेर ?– १२ देखि १४ वर्ष ।
उनले ७ कक्षामा पढ्ने एक विद्यार्थीको अभिभावक आफ्नो बच्चाले युटयुबमा ‘एडल्ट प्रोग्राम’ हेरेर हैरान भएको र कसरी छुटाउने होला भनेर सल्लाह मागेको कुरा पनि सुनाइन् । त्यसै त किशोर उमेर उत्सुक उमेर हो, अहिले हातहातामा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेटजस्तै भएको छ । जसले अश्लील श्रव्यदृश्यमा सहजै पहुँच दिन्छ ।
यो काठमाडौंको मात्र होइन, हाम्रो साझा समस्या हो ।
पारिवारिक बेमेल, विखण्डन मात्र होइन शारीरिक स्वास्थ्यका साथै मानसिक स्वास्थ्यलगायतको कारण बनेका छन् बालबिहे । किशोरावस्थामा सही यौनशिक्षा दिनुको साटो बिहे गराइदिनुले व्यक्ति जीवनका धेरै अवसरहरूबाट वञ्चित हुन जान्छ । ‘लाइफ कोर्स अप्रोच’ बाट हेर्दा पनि कम उमेरमा हुने बिहेले व्यक्तिको सम्पूर्ण जीवन नै प्रभावित भएको देखिन्छ । बिहे हुनेबित्तिकै पारिवारिक दायित्वहरू बढ्छन् । अझ हाम्रो सामाजिक संरचना बिहेपछि जिम्मेवारीका तहहरू धेरै थपिन्छन् । त्यस्तै विद्यालय जाने उमेरमा नै बिहे गरेपछि अन्य जिम्मेवारीकै कारण पनि उनीहरू पढाइबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । अनि विद्यालय/क्याम्पसमा हुने समाजिक अन्तरक्रियाबाट पनि स्वभावैले विमुख हुन्छन् । रोजगारीका विकल्पहरू सीमित हुन्छन् । र, उनीहरू बाहिरी समाजबाट पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।
सुर्खेतको साहारेको दलित बस्तीमा बच्चाहरूको पोषण सम्बन्धमा काम गर्ने गैससको कार्यक्रममा पुगेको थिएँ । ३० जना बच्चाको तौल र उचाइ लिइएकोमा बच्चाको हुनुपर्ने औसत तौल र उचाइभन्दा सबैको कम रहेको पाइयो । धेरैको त औसतभन्दा धेरै कम । यसको एक कारण पौष्टिक आहारको कमी त थियो नै । त्यसमाथि यसो तथ्यांक हेर्छु, त सबै आमाको उमेर १४ देखि १८ को बीचमा । हे भगवान् !
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७३ ०९:४८